Jos Brech dia 100% ilay mpamono olona sy mpamono olona ao Nicky Verstappen ary tsy maintsy ampifandraisina ampahibemaso!
Filed in TRANSFER NICKY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 August 2018	• 14 Comments
Tao amin'ny lahatsoratra navoakako omaly dia nanazava aho fa noho ny fampitam-baovao sy ny mpanohana azy sy ny tompony na ny fanorenana fanorenana 'Peter R. de Vries dia manana rafitra ara-dalàna vaovao eto Holandy isika. Azoko atao ny manonona ohatra vitsivitsy momba ny fizotran'ny fampisehoana tato anatin'ny taona vitsy izay tsy misy ifandraisany amin'ny lojika ara-dalàna na porofo marina, fa [...]
Jos Brech nisambotra tao amin'ny tanàna Espaniola Castelltercol! Mamela volombava volamena ny mpamaky Telegraaf!
Filed in TRANSFER NICKY, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 27 August 2018	• 8 Comments
Mahavariana ny mahita fa ny gazety lehibe indrindra momba ny fampielezan-kevitry ny fanjakana ao Holandy dia nilaza fa ny mpamaky tsy fantatra anarana voalohany dia nifandray tamin'i De Telegraaf ary avy eo niaraka tamin'ny polisy, taorian'ny sangodim-bolamena izay nitarika ny fisamborana an'i Jos Brech. Tsy tian'i Erik ny anarany ao amin'ny gazety ary noho izany dia antsointsika hoe Erik izy. [...]
Total visits: 12.925.169